“Haddii ay Liverpool naga badiso….”.- Guardiola oo Digniin kama dambeys ah u diray kooxdiisa Man City ka hor kulanka Khamiista – Gool FM
“Haddii ay Liverpool naga badiso….”.- Guardiola oo Digniin kama dambeys ah u diray kooxdiisa Man City ka hor kulanka Khamiista
(England) 01 Jan 2019. Manchester City ayaa khamiista Etihad Stadium ku marti galineysa hogaamiyayaasha Premier League ee Liverpool kulan uu Pep Guardiola ku xiray rajadooda horyaalka.
Macalinka reer Spain ayaa aaminsan inay qasab tahay inay garaacaan Liverpool si ay ugu tartamaan horyaalka, isagoo sheegay inay isku dhammaatay rajadooda haddii laga adkaado kulanka la wada sugayo.
“Marka la fiiriyo booska ay joogto Liverpool, haddii aan lumino dhibco way isku dhammaatay, way dhammaatay rajadeena, ku dhawaad mid aan macquul ahayn ayay noqon doontaa,” Guardiola ayaa yiri ka hor kulankooda Liverpool.
“Dabcan iyaguba dhibco way lumin doonaan laakiin dhibco badan maaha.
“Haddii aad dooneyso inaad halkaa joogto ilaa dhammaadka sida ugu dheer ee ugu macquulsan waa inaad xusuusataa wixii dhacay kal ciyaareedkii tagay iyo midan sidoo kale, marka laga reebo maalimihii yaraa ee tagay.
“Marna ma ilaaweyno cida aan nahay. Mararka qaar waa inaad wajiga iska laadaa aad yare noqotaa mid madax adag aadna waydiisaa ‘Xarfaaney, maxaa dhacay?”
“Laga yaabee inaan qaldanahay laakiin ciyaartoyda meel kasta waxay doonayaan inay si fiican sameeyaan. Mararka qaar waa inaad garowsataa in rabitaanka inaad si fiican sameyso aysan kugu filneyn, waa inaad markale isku daydaa.”.